Momba anay - Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dia miorina ao amin'ny ivon-toerana ara-toekarena faritry ny faritany ara-toekarena Yangtze River Delta., Reniranon'i Yangtze, any Taihu no misy azy. Atsinanana hatrany amin'ny ivon-toekarena sinoa-Shanghai 150 kilometatra, andrefan'ny renivohitra taloha-Nanjing 150 kilometatra, atsimo mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Wuxi Sunan 50 kilometatra. Jinghu sy yanjiang làlam-be roa mifanena any amin'ny faritanin'i jiangyin, ny tetezana ao jiangyin Yangtze River dia mampita ny avaratra sy atsimon'ny reniranon'i Yangtze, foiben'ny fitaterana lehibe ao amin'ny renirano Yangtze any andrefany. Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dia miorina eo atsinanana atsinanana amin'ny zaridainam-panjakana yunting.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd orinasa mitambatra izay mifantoka amin'ny siansa, indostria ary varotra. Manana mpiasa maherin'ny 300 izy, ao anatin'izany ny mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny 88. Ankehitriny dia mpikambana ao amin'ny haren'ny angovo azo avy amin'ny masoandro ao Shina izy io. Ny orinasanay dia nandalo ISO9001: 2008 Quality Management System Certification, ISO14001 tontolo iainana Certification System Management, 18001 Fanamarinana rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa. Ny vokatra dia misy solika, solika, sakafo, fandefasana, lalamby ary tariby elektronika, sns. Ankehitriny dia manana faritra fanodinana mihoatra ny efa-polo alina metatra toradroa isika ary mihoatra ny 80 fitaovana manokana ho an'ny famokarana, ny varotra isan-taona amin'ny taona 2018 dia 2.5 hetsy tapitrisa. Ny orinasanay dia manana varotra, varotra, sampana tetikasa, sampan-draharaha teknolojia, QC, efitrano fanaovana asa tanana, sampana famokarana, laboratoara, sampan-draharaha misahana ny serivisy, sns, izay manome rafitra antoka matanjaka ho an'ny famokarana, ny kalitaon'ny varotra ary ny varotra aorian'ny vokatra.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny orinasa dia nanambola be tamin'ny fianakaviana matanjaka, namolavola sy nanamboatra fehin-kibo conveyor maivana mihoatra ny folo, lamba vita amin'ny fingotra ary tsipika famokarana ravina vita amin'ny rubber. Ankehitriny dia manana banbury 3 izahay, milina fampifangaroana 12, iray kalandrie efatra-roll 1830, iray calender telo-roll iray, milina fanasitranana amponga 1400 amponga, milina fanasitranana amponga amponga miisa 1800, milina fanasitranana amponga 2000, iray 2200 milina fanasitranana karazana amponga, milina fanasitranana karazana amponga 3000, milina fanasitranana amponga 4200, milina fanasitranana amponga 4200 no lehibe indrindra manerantany. Ankoatr'izay, manana milina fanontam-pirinty miisa 8 izahay, izany hoe 2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000. Tamin'ny 2016, nanao milina faran'izay lehibe izahay, 24 metatra ny sakany.
Caycemay dia mifantoka amin'ny fitondrana enta-mavesatra ary koa ny entana mora. Betsaka ny mpiasa matihanina sy mahay no mirotsaka sy mianatra mba hiantohana ny fiasan'ny rafitra kalitao, ny fitantanana ny famokarana ary ny fahaiza-mivoatra amin'ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany, mba hanangonana vaovao farany momba ny tsena sy hafatra teknika izay manohana ny firoboroboana amin'ny vokatra vaovao, Caycemay dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy marin-toerana amin'ireo andrimpanjakana fanadihadiana sasany. Amin'izao fotoana izao dia manana patanty roa ambin'ny folo ny orinasa, volavola vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo, fenitra indostrialy fandosiran-tsolika mahazaka hafanana, mandray anjara amin'ny fanitsiana ny fenitra nasionaly amin'ny gorodona.
Ny kalitao dia ny ain'ny orinasa, ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fifehezana ny kalitaon'ny vokatra, manana mpiasa matihanina mifantoka amin'ny fitantanana kalitao izahay, manana laboratoara vokatra matihanina, efitrano fitiliana, laboratoara. Ao amin'ny famokarana, mifikitra amin'ny famokarana manara-penitra izahay, fampiharana henjana ny fenitra nasionaly, fenitra indostrialy ary fenitra orinasa, mba hahafahan'ireo vokatra manome fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa Caycemay dia mifandraika amin'ny famokarana nasionaly amin'ny indostria isan-karazany manerana ny firenena, ny vokatra sasany dia aondrana any amin'ny firenena maro. Ny ambaratongam-pamokarany, ny kalitaony, ny vidiny, ny fandefasana azy ary ny mpanjifa manana fiderana ny mpanjifa ny serivisy ary manana laza malaza.
Ny vokatra Caycemay dia mikendry ny avo lenta, handevona ary handraoka ny haitao mandroso vahiny, andraikiny ny manolo ny fanafarana entana, mampitombo ny tahan'ny ao an-trano. Natolotra ho an'ny orinasa vahiny ny lamba mahazaka afo ho an'ny fiara fitaterana; silipo vita amin'ny silipo ho an'ny laminatoran'ny masoandro, fitaratra, fanaovana hazo ary fanaovana karatra dia manana laza tsara; mivoatra tsara ny gorodona.
Miaraka amin'ny hevitra fa ny kalitao avo indrindra, ny serivisy tsara indrindra, ny vidin'ny fifaninanana dia hampiorina sy hampitombo ny orinasa, Caycemay dia manohy manangana ny kolontsaina sy ny fiheverana ny "mifototra amin'ny olombelona." Ity hetsika ity dia mandrisika ny mpiasa hanatsara ny andraikitra sy ny fanavaozana ny fahaiza-manao izay manatsara ny hery sy ny firaisan-kinan'ny orinasa.
Miaraka amin'ilay fiheverana hoe "tso-po sy fahatokisana no manintona ny mpanjifa eran'izao tontolo izao", Caycemay amin'ny zotom-po dia mandray anao hitsidika ny orinasa amin'ny fanatrarana ny fahatokisanao, ny fanohanananao ary ny fiderana anao noho ny vokatra sy serivisy tsara indrindra any Caycemay.
Caycemay dia nanangana rafitra antoky ny kalitao avy amin'ny akora miditra ao amin'ny orinasa ka hatramin'ny serivisy aorian'ny fivarotana ary fikambanana fampandrosoana ny vokatra vaovao miaraka amin'ny injeniera sy ny mpiasa teknika ho tena lehibe. Miorina amin'ny fametrahana fitoniana amin'ny famokarana vokatra efa misy ary fanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny vokatra. Ampitomboy ny tanjaky ny fanovana ara-teknolojia sy ny fanavaozana ny teknolojia ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo sampana fikarohana sy siantifika ao an-toerana. Manakarama manam-pahaizana avy any ivelany. Mamaha olana ara-teknika amin'ny fizotry ny famokarana ary mamolavola vokatra vaovao. Ny orinasa Caycemay dia vonona ny hanome ny mpanjifa serivisy azo antoka sy voarindra, hamaly ary hanafoana ny tsy fahombiazan'ny fehikibo (conveyor) fehikibo ary misafidy ireo vokatra fehikibo azo ampitaina (conveyor) mifanaraka amin'ny fepetra arahin'asa sy ny fangatahan'ny mpampiasa. Ny fitaovana fanodinana any ambanivohitra namboarina sy novolavolain'ny orinasa dia afaka miantoka ny fifamatorana haingana sy mahomby amin'ny fehikibo ary ny famatorana eo amin'ny toerana fehikibo ataon'ny mpampiasa. Ahenao ny ora fihenan'ny fotoana. mampihena ny vidin'ny famokarana. Ny mpampiasa dia afaka mamaritra ny habeny sy ny mombamomba ny fehikibo, ny fehikibo tsy misy farany na ny fehikibo misokatra, na ny fametahana lakaoly, ny torolàlana na ny zipo amin'ny fehikibo. Fantatray ny fangatahanao fehikibo amin'ny ankapobeny ary mino izahay fa hanampy anao ny serivisinay.